Suárez oo ka warbixiyay aragtidiisa ku aadan in Barcelona ay la soo saxiixato weeraryahan cusub – Gool FM
(Barcelona) 29 Feb 2020. Xiddiga kooxda kubadda cagta Barcelona ee Luis Suárez ayaa beeniyay wararka xanta ah ee sheegaya in ciyaartoyada ay yihiin kuwa maamula kooxda sanadihii lasoo dhaafay, isagoo xusay in maamulka uu qaato dhamaan go’aanada kama dambeysta ah.
Luis Suárez ayaa hadda kaga maqan Barcelona dhaawac dhanka Jilibka ah, waxaana dhawaanahan soo baxday warar sheegaya in Barca ay badelkiisa saxda ah u aragto laacibka reer Argantina iyo kooxda Inter Milan ee Lautaro Martínez.
Haddaba Luis Suarez ayaa soo dhaweeyay in Barcelona aya la soo saxiixato Lautaro Martínez xagaaga soo aadan, isagoo tilmaamay inuu heysto waxyaabaha u suurtogalin kara inuu ku ciyaaro garoonka Camp Nou, isla markaana ay muhiim u noqon doonto kooxda.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa soo xigtay wareysi uu bixiyay Luis Suárez waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Lautaro Martínez wuxuu leeyahay awood weyn marka loo fiirsho heerka uu ku soo bandhigay Inter iyo Argentina, waa sannadkiisii ​​labaad ee Italy, wuxuuna bixinayaa qaab ciyaareed aad u wanaagsan, laakiin waa in la fahmo in go’aanada aysan qaadan ciyaartoyda”.
“Wax go’aan ah ma qaadano, haddii ay ku xirnaan laheyd ciyaartooyda, waan horumarin laheyn wax yar, waxaan sheegay laba sano ka hor way fiicnaan lahayd in la keeno weeraryahan, weeraryahan da’ayar ah si uu wax u sii barto, laakiin maamulka wey iska indho tireen”.